यी हुन् आफुले लगाएको सिक्री बेचेर विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल हेर्न सय किमी यात्रा गर्नेहरु ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/यी हुन् आफुले लगाएको सिक्री बेचेर विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल हेर्न सय किमी यात्रा गर्नेहरु !
यी हुन् आफुले लगाएको सिक्री बेचेर विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल हेर्न सय किमी यात्रा गर्नेहरु !
रासस ,गलकोट । मानिसको सोच, इच्छा पनि अनेक हुन्छ । र, त्यो इ’च्छाशक्ति दृढ भए ज’र्बजस्त पनि पुरा गर्ने चाह हुन्छ । त्यही हुटहुटीमा थिए निसीखोला गाउँपालिका–३ धाराखर्कका तीन किशोरी र एक किशोर । तर, हरितालिका तिजको दिन घर छोडेका उनीहरु हराएको खबर भाइरल भयो । निसीखोलाको वडा नम्बर–७ स्थित पर्यटकीय स्थल नर्सिङकोट घुम्न निस्केका आठ जनामध्ये चार जना साँझ घरमा फर्के । १७ वर्षीया अस्मिता सुनार, १५ वर्षीय रामप्रसाद सुनार, १६ वर्षीय श्यामु शिर्पाली र १५ वर्षीया सम्झना सिर्पाली भने सम्पर्क वि’हिन भए ।
परिवारले खोजी गर्न झिवाखोला प्रहरीमा नि’वेदनसमेत दियो । हराएको भनिएको पाँच दिन पछि बागलुङ बजारबाट ती किशोर किशोरी फेला परे ।यद्यपी, उनीहरु ह’राएको नभई विश्वकै लामो दा’बी गरिएको बागलुङ र पर्वत जोड्ने झोलुङ्गे पुल हेर्नका लागि बागलुङ आएको खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र रेग्मीका अनुसार नर्सिङकोट घुम्न गएका आठमध्ये चार जना बागलुङका लागि निसीखोलाबाट हिँडेर बुर्तिवाङ आएका थिए ।बुर्तिवाङको सून पसलमा सोही दिन तीन किशोरीमध्ये दुई किशोरीले आफूले लगाएको चाँदीको सिक्री बेचेर ट्याक्सी चढेर बागलुङ आएको रेग्मीको भनाइ छ ।
“घाटीमा लगाएको दुइ वटा सिक्री बेचेर ट्याक्सी चढेर बागलुङ आएको पाइयो”, रेग्मीले भन्नुभयो “बागलुङ बजारको चिप्लेटी बसपार्कमा बास बसेका उनीहरुले लामो पुल अवलोकनसमेत गरेका रहेछन् ।” कालिका मन्दिरसमेत घुम्न गएका उनीहरुलाई प्रहरीले फ’र्काएको थियो । पैसा र बासको अ’भावमा घर फर्कन नसकेका उनीहरुलाई प्रहरीले भदौ १० गते बागलुङ बजारमा फेला पारेको थियो ।बागलुङ बजारमा नि’षेधाज्ञा भएका कारण घर फर्कन स’मस्या भएका कारण परिवारको स’म्र्पकमा नआएको हुन सक्ने परिवारका सदस्य बताउँछन् ।
घरबाट घुम्न भनेर नि’स्केका चारै जना स’म्र्पक बिहिन भएपछि चि’न्तामा रहेको र घु’म्ने क्रममै भेटिएको खबरले खुसी दिलाएको श्यामु सिर्पालीका बुबा कोकबहादुर बिकले बताउनुभयो । “हामी त त’नावमा थियौं, कसैले अ’पहरण, केही ग¥यो कि भनेर ड’राएका पनि थियौं,” बिकले भन्नुभयो, “रामप्रसाद सुनार, अस्मिता सुनारले घरबाट एक हजार र श्यामु सिर्पालीले ६०० लगेर निस्केका रहेछन् ।” सिर्पालीका बुबाका अनुसार बागलुङ बजारमा प्रहरीले फे’ला पारेर बुर्तिवाङ ल’गेर परिवारको जि’म्मामा लगाइदिएको छ ।
उनीहरुले दुई वटा चाँदीको सिक्री बुर्तिवाङ बजारमा रु तीन हजारमा बिक्री गरी ट्याक्सी चढेर लामो पुल हेर्न बागलुङ बजार १० किमी पैदल र ९० किलोमिटर सवारी यात्रा गरी बागलुङ बजार आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा क’माएको रामरेखा अदुवाबारी पुलका विषयमा उनीहरुले जानकारी पाए पछि परिवारलाई खबर नगरी बागलुङ बजारमा आएका थिए ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका २२१ जनाको शव
फेरि अर्को देहत्यग : भोलि मेरो जन्म दिन हो ‘सुखकाे दिन कहिल्यै आएन’ भन्दै संसार छोडे
पहिलोपटक रजस्वला हुँदा सात दिनसम्म लुकेर बस्नुपर्ने किशोरीहरुको बाध्यता